विप्लव माओवादीका सेती व्यूरो सदस्य शाह पक्राउ | Nagarik News - Nepal Republic Media
विप्लव माओवादीका सेती व्यूरो सदस्य शाह पक्राउ
धनगढी- नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सेति व्यूरो सदस्य डवल शाह पक्राउ गरेका छन्। पूर्व सभासद समेत रहेका शाहलाई प्रहरीले शुक्रबार धनगढीबाटै पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले उनलाई बिहान धनगढी उपमहानगरपालिका ५ हसनपुर स्थित डेराबाट पक्राउ गरेको हो।
उनलाई राजद्रोहको मुद्दा दायर गरिएको छ। कैलालीका एसपी आभुषण तिम्सिनाका अनुसार जिल्ला अदालत कैलालीबाट सात दिनको दिनको म्याद थप गरेर उनलाई थुनामा पठाइएको छ। शाह चन्द समूहका सेती व्यूरो कार्यालय सचिव समेत हुन्।
प्रकाशित: १३ वैशाख २०७६ १६:१९ शुक्रबार
विप्लव नेकपा पक्राउ
बझाङमा पहिरोले १७ घर बगायो, ठूलो मानवीय क्षतिको आशंका
वर्षासँगै गाउँ माथिबाट आएको पहिरोले गए राति केदारस्युँ गाउँपालिका–८ मल्लेस गाउँका १७ घर बगाएको स्थानीयले बताएका छन्। पहिरोबाट ठूलो मानवीय क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। बिहान करिब सवा १ बजेतिर पहिरो गएको हो।
कोभिड–१९ को नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीको अवधिमा तलब–सुविधा नपाएको भन्दै झापाका निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्।
मेरो कविताले ठूलो ओखतीको काम गरेछ! ‘तिम्रा कविता दिनमा धेरै पटक सुनें। ममा बाँच्ने चाहना बढेको छ। आत्मबल बढेको छ’, एकाबिहानै उसले भन्यो, ‘अहिले म हिँड्न सक्ने भएँ। नत्र त मरिसक्थें होला! आखिर यो संसारमा मलाई माया गर्ने पनि कोही त रहेछ!’